Ingqungquthela ye-15th International gvSIG - usuku 1 - iGeofumadas
Ingqungquthela ye-15th International gvSIG - usuku 1
Novemba, 2019 Geospatial - GIS, I-GvSIG, Innovations
Ingqungquthela ye-15th International gvSIG iqale ngoNovemba 6, e-Higher Technical School of Geodetic, Cartographic and Topographic Engineering - ETSIGCT. Lo mcimbi uvulwe iziphathimandla ezivela ePolytechnic University yaseValencia, iGeneralitat Valenciana kanye noMqondisi Jikelele weNhlangano ye-gvSIG u-Alvaro Anguix. Lezi zinsuku zisanda kuqondana nje nazo gvSIG Desktop 2.5, elungele ukulandwa.
NjengoGeofumadas, sinqume ukuhambela lo mcimbi mathupha, phakathi nalezi zinsuku ezintathu, sazi ukuthi yini le nqubo ye-software yamahhala eyimelele, namuhla okube yinyathelo elizelwe esimweni seSpanishi ngobukhulu obukhulu bokusizakala kwamazwe omhlaba.
Ngalolu suku lokuqala losuku uhlelo lokuqala lwezethulo, lwaluphethe abamele i-Institut Cartografic Valencià - Generalitat Valenciana, i-CNIG - Isikhungo Sikazwelonke Sezokwazisa Sikazwelonke waseSpain kanye nobuntu bukaHulumeni wase-Uruguay, owethule i-IDE yase-Uruguay kwenziwe kwi-gvSIG Online.
Kamuva, iseshini yesibili yaqhubeka, lapho kuzoxoxwa khona nge-IDE's. Kulomhlangano abamele i-European Thematic Center yase-University of Malaga bebethula izifundo zabo zamacala, abekhuluma ngawo PANACEA I-MED Biodiversity. Ngemuva kwalokho, uRaúl Rodríguez de Tresca - IDB yathatha phansi, yethula uhlaka IGeoportal yokuphathwa komgwaqo eDominican Republic, ukukhiqiza ubuchwepheshe bokusekela ukuphathwa kokuqanjwa kwamanethiwekhi omgwaqo namabhuloho. Ngaphezu kwalokhu, uRodriguez uthe ukubaluleka komsebenzi wakhe ukuthi abantu abaningi banokuqwashiswa ngendawo,
"Esikuzuzile ukuvulwa kwengqondo, njengamanje kunabantu abavamile abaxhumene namaphrojekthi acela ukufakwa kwabo ukufinyelela ezisekelweni futhi bakwazi ukuphatha imininingwane."
Kulesi sakhiwo esifanayo, uRamón Sánchez de Sans2 Innovación Sostenible SL, ukhonjisiwe Ukusebenza kwe-gvSIG kugxile kulawulo lwengqalasizinda, okungukuthi, ukuthi ungaxhuma kanjani izinhlelo zokubhekwa futhi uyihlanganise ne-GvSIG GIS yamahhala, ukukhuthaza ukulawulwa kwengqalasizinda kanye nezimpendulo ezisebenzayo ngesikhathi somcimbi.
Ibhlokhi lesithathu losuku elihlobene nokuhlanganiswa, okwenziwe nguJoaquín del Cerro, omele inhlangano ye-gvSIG, wethule ukuthuthukiswa kanye nokuvuselelwa kohlelo Ukulawulwa kwengozi nokuhlanganiswa ne-ARENA2 Yenqondisi Elijwayelekile Lezentengiso ku-gvSIG Desktop. Ngakolunye uhlangothi, u-Oscar Vegas wethule Umkhakha wezandla wamamodeli wenethiwekhi yokunikezwa kwamanzi avela ku-gvSIG ngosizo lwe-ConvertGISEpanet kanye namathuluzi we-RunEpanetGIS, okungamathuluzi wokukhiqiza amamodeli we-hydraulic amanethiwekhi wokuphakelwa kwamanzi, enziwe abonakalayo ukuthi angaluhambisa kanjani ulwazi ku-GIS, kanye nokukhululeka kokuguqulwa kwamafayela nokwethulwa kwedatha.
Siyaqhubeka nokwethulwa kokugcina kwe-4to block ngesethulo sika-Iván Lozano de Vinfo VAL, obekhombisa ukujabulisa kakhulu njengoba iVinfoPol, yathuthukisa zonke izinqubo ezihambelana nenkambu yamaphoyisa, ukusuka ezindaweni, ukukhonjwa kwamaphrofayili obugebengu, inhlawulo phakathi kwabanye. Leli thuluzi lakhiwe njengesikrini, lapho ungaphatha khona zonke izehlakalo zendawo yokusebenza kwamaphoyisa, "sakha ukuphathwa okuphelele kokuphatha lonke uhlelo amaphoyisa asebenza nalo ohlelweni olulodwa."
Ekugcineni, sifika ekupheleni kwezikhathi ngesihloko Samadivayisi Eselula. Kulesi sigaba, kwethulwe izindaba zempumelelo ezenziwa ngamaselula, isibonelo, uNjiniyela uSandra Hernández wase-Autonomous University of the State of Mexico, waveza imininingwane nge Ukuhleleka kanye nokuqoqwa kwedatha ebaleni ngokusebenzisa izinhlelo zokusebenza zamaselula namadivayisi, kuhlola ukuhamba kwe-Walkable Center ye-Historic Center yaseToluca. Ngale projekthi, ababekhona babekwazi ukubona ngeso lengqondo umsebenzi owenziwa ngohlelo lweselula lwe-gvSIG, olukhululekile futhi olusebenza ngokungaxhunyiwe ku-inthanethi ngaphandle kokuxhuma kunethiwekhi ye-Wi-Fi noma yedatha, lonke lolu lwazi oluqoqwe kamuva luzocutshungulwa futhi luhlaziywe kwi-desktop ye-gvSIG, ukukhipha imibiko mayelana nokuhamba okuhanjwa yizakhamizi zaseToluca nengqalasizinda yazo yokuhamba kwamahhala.
I-gvSIG Association ikhuthaza ukufakwa kule nkomfa hhayi ngezinhlangano noma izinkampani ezinkulu kuphela, kodwa futhi kwenze kwabonakala nomsebenzi womunye wabafundi bayo, iGlene Clavicillas ngephrojekthi yakhe Ukwenza imidwebo yezolimo ngokuhlaziywa okuningana kwesikhashana kwezithombe zesathelayithi kanye ne-cadastral cartography
Zonke ezinye ntambama zaqhubeka nezinkundla zokusebenzela, lapho abaningi babhalisela khona mahhala. Ama-workshop abandakanya izihloko ezinjenge-gvSIG yabaqalayo, ukuhlaziywa kwedatha nge-gvSIG noma i-ConvertGISEpanet - RunEpanetGIS - gvSIG yokwelashwa kolwazi kumanethiwekhi okuhanjiswa kwamanzi.
Uma ngabe uyisinyathelo esisodwa kude neValencia, kusasele izinsuku ezimbili; esithemba ukuthi kuzobozwa izingxoxo nabadlali abamqoka ezizosinika umbono wabo wokuthi bacabanga ukuthi i-gvSIG izoyaphi eminyakeni elandelayo.
I-GIS I-GVSIG I-GvSIG OS
Thumela Previous«Langaphambilini IGeo-Engineering neTwinGeo Magazine - Uhlelo Lwesibili
Post Next Ingqungquthela ye-15th International gvSIG - Usuku 2Okulandelayo »